Februwari 2017: kufudumele futhi kunomswakama kakhulu kunokujwayelekile | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Sisanda kuchitha inyanga ebonakaliswe ngokufudumele kunokujwayelekile futhi lapho imvula ina kakhulu ezindaweni eziningi zaseSpain.
Kwakuyinyanga yokugcina yobusika besimo sezulu, kodwa ngaphezu kobusika, kwabonakala kufana nokuqala kwentwasahlobo. I-AEMET iqoqa imininingwane embikweni wayo wenyanga, imininingwane engikulethela yona ngezansi.
Lesi sithombe sikhombisa ukungahambi kahle kwezinga lokushisa okurekhodwe ngenyanga kaFebhuwari eSpain. Isithombe - AEMET
Inyanga ka febhuwari ube nomlingiswa ofudumele noma ofudumele kakhulu engxenyeni enkulu yezwe.
Maphakathi nasenyakatho-ntshonalanga yeCastilla y León, Izwe laseBasque, iLa Rioja, iNavarra, i-Aragon, iCatalonia, iMallorca neMenorca lahlangabezana nokungahleleki okuhle okungaba ngu-2ºC. Kuyo yonke inhlonhlo naseziQhingini zaseBalearic okungahambi kahle kwakungu-1ºC omuhle.
Amazinga okushisa aphezulu aqoshiwe ahambelana nesikhumulo sezindiza saseTenerife South, esino-28,6ºC ngomhla ka-17, nasesikhumulweni sezindiza iLanzarote esino-27,2ºC, nango-17. 24ºC yabhaliswa esikhumulweni sezindiza i-Alicante ngomhla ka-28, nango-23,9ºC eCastellón ngomhla ka-7.
Ngokuqondene nobuncane, Amaqhwa abalulekile avela ngosuku lwesi-9 ePuerto de Navacerrada, nge -7,3ºC, nangosuku 2 eMolina de Aragón nge -6ºC.
Kulesi sithombe ungabona okungahambi kahle kwimvula ebhaliswe ngenyanga kaFebhuwari eSpain. Isithombe - AEMET
Ngenyanga edlule bekumanzi kakhulu, imvula enesilinganiso esingu-72mm, inani eliphakeme ngama-36% kunenani elijwayelekile (53mm). Izindawo lapho lina kakhulu khona kube yilezo ezisengxenyeni esenyakatho yenhlonhlo, nasenyakatho yeFuerteventura. Empumalanga yenhlonhlo naseziqhingini zase-Ibiza naseFormentera yomile noma yomile kakhulu.
Entshonalanga yeGalicia, kweqiwa ngama-200mm, nakwezinye izindawo zeCentral System ne-Iberia System, i-100mm phakathi nezinyanga eziyishumi zokuqala zenyanga. Ngomhla ka-12 bekunemvula enkulu ethekwini laseNavacerrada, nge-137mm, nase-ilavila nge-51mm.
Sasinjani isimo sezulu endaweni yangakini ngoFebhuwari?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isimo Sezulu » Februwari 2017: kufudumele futhi kunomswakama kakhulu kunokujwayelekile